Wararka - Sida Loo Doorto Kettle Koronto?
Kettle koronto inta badan waa isticmaalay nolosheena, waxaa ka mid ah guriga ama hoteelka. Markaan dooneyno biyo kulul, weelasha korontada ayaa dabooli karta baahideena, laakiin qaar ka mid ah jaakadaha korontada ee aan caadiga ahayn ayaa noo keeni kara xoogaa waxyeello ah, sidaa darteed marka la eego badeecooyinka kala duwan ee jaakadaha korontada ee suuqa yaalla, maxaan yeelnaa? Sideema dooran karnaa wanaagsan digsiga korontada?
Guud ahaan fiiri agabka gudaha iyo maaddada dibadda, maaddada gudaha ayaa aad muhiim u ah maxaa yeelay waxay si toos ah ula xiriirtaa biyaha. Markaad dooranayso weelka korontada, waa inaad fiirisaa haddii taangiga gudaha uu leeyahay aSUS304 calaamad kaas 304 birta aan birta lahayn, u adkaysta heerkulka sare oo leh adkayn wanaagsan si loo ilaaliyo caafimaadka dadka. Caagadaha korontada ee AOLGA waxaa laga sameeyey tayo sareSUS304 ama SUS316 ahama si loo hubiyo badbaadada badeecada iyo cimri dhererkeeda
Intaa waxaa dheer, maaddada dibadda ee kettle korontada ayaa iyaduna aad muhiim u ah. Waqtigan xaadirka ah, inta badan ketles-yada korontada ee suuqa ku jira waxaa laga sameeyay caagag heer sare ah iyo dhoobada, mana laha ur gaar ah. Laakiin sidoo kale waxaa jira meherado shaqsiyeed si loo yareeyo kharashaadka. Haddii la isticmaalo muddo dheer, walxo waxyeello leh ayaa la sii deyn doonaa, taas oo halis gelin doontanoo caafimaadka.
Markaad iibsaneyso kettle koronto, marka lagu daro fiirinta in muuqaalka uu ku qanci karo ama lama filaan ah, waa in sidoo kale laga cabbiraa habka wax soo saarkiisa, oo ay kujirto habsami u lahaanshaha caagga dibadda ah ee jaakada korontada in la arko haddii balaastigga iyo weelka birta ah ee birta ah aysan isku mid ahayn, iyo haddii lakabka dibadda ee caaggu uu xoqan yahay. . Alaabta wanaagsan waxaa lagu arki karaa habka wax soo saarka. Kettle -ka korontada ee AOLGA wuxuu ka yimaadaa farsamada gacanta ee caalamiga ah, farsamada farsamada leh ee wax -soo -saarkana waa laga mahadin karaa muuqaalka fudud iyo jawiga.
Xulo shaqaynta heerkulka xaddidan
Dooro koronto karkaris leh hawsha xakamaynta heerkulka kaas si otomaatig ah ayuu u jari karaa korontada kadib marka biyaha la kariyo. Inta badan of ketles korontada suuqa isticmaal xaddidayaasha heerkulka.
Si taxaddar leh u hubi astaanta badeecadda iyo sharraxaadda. Heerku wuxuu qeexayaa in astaanta badeecaddu ay ahaato mid dhammaystiran, oo ay ku jiraan: magaca shirkadda, cinwaanka, moodeelka, qeexitaannada (sida awoodda), summadaha, xuduudaha korantada, xuduudaha awoodda, astaamaha dabeecadda korontada, iwm .; waa in laga hortago si xun u isticmaalka Digniinta, hababka nadiifinta oo faahfaahsan, iwm.
Caagadaha korontada waa in loo iibsadaa si waafaqsan caadooyinka isticmaalka iyo baahiyaha dhabta ah. Awoodda ketles -ka korontada ee hadda suuqa yaala ayaa u dhexeeya 0.6L iyo 1.8L. Qoysaska 2 ilaa 3 qof waxay dooran karaan ketles koronto oo qiyaastii ah 1.2L iyo 1000W; 4 ilaa 5 Dadku waxay dooran karaan 1.8L, 1800W kettle koronto.
Hore: Sida loo isticmaalo Miisaanka Miisaanka Elektaroonigga CW275 si sax ah
Xiga: Beijing waxay qorshaynaysaa inay hesho 1,000 guri oo lagu qiimeeyo xiddigaha shan sano gudahood